Mahad iyo Abshir oo kala dhex galay Xaashi & Guuleed | KEYDMEDIA ENGLISH
Mahad iyo Abshir oo kala dhex galay Xaashi & Guuleed
Dadaal xooggan oo ay sameeyeen xubno ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee JFS, ayaa dedejiyay xal u helidda khilaaf la xariiray doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiye ku xigeynkii hore Aqalka sare, Abshir Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari) iyo Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, ayaa qeyb lixaad leh ka qaatay xal u helidda khilaaf dhawaan soo kala dhex galay Guddoomiyihii Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo RW ku xigeynka dalka Mahadi Maxamed Guuleed.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Xukuumadda, kulan uu Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble, la yeeshay Xaashi & Guuleed, ayaa lagu dhammeeyay madmadowgii soo kala dhex galay, iyadoo la isku afgartay in ay si wada jir ah Ra’iisul Wasaaraha ugala shaqeeyaan dhammeystirka doorashada Somaliland.
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, xalka khilaafka ayaa soo degdegay, kadib markii ay Guddoomiyihii hore ee Aqalka sare, kulamo is daba-joog ah la qaateen Abshir Bukhaari iyo Mahad Salaad, oo uu soo wakiishay RW Rooble, waxaana is-aragyo xalay iyo shalay siyaabo kala duwan u dhacay looga gudbay tabashooyin ka jiray dhanka Cabdi Xaashi.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan qeyb ka noqdo dhameynta madmadowgii ku dhex jiray walaalaheen siyaasiinta Somaliland si horay ay ugu socoto doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Gobolada Waqooyi (Somaliland)”. Ayuu yiri Mahad Salaad.
Heshiisiinta labadaan daraf, oo aan ahayn markii, 1aad, 2aad, 3aad, iyo 4aad toona, ayaa hadda ku soo adday xilli shalay la doortay 9 kusri, inkatoo ay garabka Xaashi, oo ay gadaal ka taagan yihiin siyaasittin iyo odayaal dhaqan ay hore u sheegeen in aysan qeyb ka aheyn.
Waraaq ka soo baxday xaafiiska Cabdi Xaashi, 21 January 2022, ayaa lagu sheegay in la joojiyo qabashada doorashada kuransta laysku haysto ee la shaaciyey, dibna loogu soo celiyo ka tashigooda beelaha iyo Suldaamada xaqa u leh, hayeeshee, guddoomiyihii hore ee Aqalka sare ayaa hadda u muuqda inuu qodobkaas ka tanaasulay.
Dhawaan siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi, oo uu ku jiray Cabdi Xaashi, ayaa hadalkooda u dhigay in ay Ra’iisul Wasaaraha ku dacweynayaan beesha uu ka dhashay ee Habargidir, waxaana tallaabada Abshir Bukhaari iyo Mahad Salaad loo fasiran karaa in ay kaga jawaabayeen cabashadaas.